Fizahan-tany any Armenia: ny firenena tranainy indrindra dia mirakitra mpitsidika bebe kokoa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahan-tany any Armenia: ny firenena tranainy indrindra dia mirakitra mpitsidika bebe kokoa
Ny hatsaran-tarehy mijoalajoala amin'ireo tendrombohitra avo be, topografika mahafinaritra, lova sy kolontsaina manankarena, sakafo matsiro, toerana manan-tantara efa an'arivony taona lasa izay, zava-niainana. Ity no hafatra on armenia.travel.
Armenia dia firenena, ary repoblika sovietika taloha, any amin'ny faritra be tendrombohitra Caucasus eo anelanelan'i Azia sy Eropa. Anisan'ireo sivilizasiona kristiana voalohany indrindra, izy io dia faritan'ny tranonkala ara-pinoana toy ny Greco-Roman Temple of Garni sy ny katedraly Etchmiadzin tamin'ny taonjato faha-4, foiben'ny fiangonana Armeniana. Ny monasiteran'ny Khor Virap dia toerana fivahinianana masina eo akaikin'ny tendrombohitra Ararat, volkano tsy matory eo ampitan'ny sisintanin'i Tiorkia.
Armenia dia manana tantara taloha sy kolontsaina manankarena. Raha ny marina dia iray amin'ireo firenena tranainy indrindra eto an-tany izy io. Fikarohana siantifika, fikarohana arkeolojika maro ary sora-tanana tranainy no manaporofo fa ny Armenian Highlands no tena Cradle of civilization.
Ny sasany amin'ireo zavatra taloha indrindra eto an-tany dia hita tany Armenia. Kiraro hoditra tranainy indrindra eran-tany (5,500 XNUMX taona), mpandinika lanitra (7,500 7,500 taona), sary momba ny fambolena (XNUMX XNUMX taona) ary toerana fanaovana divay (6,100 taona) rehetra dia hita tao amin'ny faritanin'i Armenia.
Ny isan'ny mpizahatany nitsidika an'i Armenia tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2019 dia nitombo efa ho 12,3%. Ny minisitry ny toekarena Armeniana Tigran Khachatryan dia nanambara izany tamin'ny zaikabe vaovao vao tsy ela akory izay.
Ny fitsidihan'ny mpanao gazety vahiny sy ny bilaogera dia fitaovana iray lehibe nampiasain'i Armenia Tourism Marketing.
Gazety 17 avy amin'ny Fikambanan'ny mpanao gazety any Suisse no tonga tany Armenia tamin'ny fitsidihana fampidirana ary vokatr'izany dia lahatsoratra 30 mahery momba an'i Armenia no navoaka.
Armenia dia nahatratra 12.3% ny mpitsidika tamin'ity taona ity raha oharina amin'ny fahatongavana isaina amin'ny halavany tamin'ny taon-dasa. 770,000 ny mpizahatany nitsidika an'i Armenia.
Manome lanja ny fizahantany sinoa ho zava-dehibe i Armenia. Ny fampidirana ny Union Pay any Armenia, ny carte de crédit sinoa dia hita fa singa iray lehibe manintona ireo mpitsidika avy any Chine. Ny minisitra Khachatryan dia nanonona ny kaonferansa iraisan'ny Armeniana-Sinoa momba ny raharaha ara-barotra sy ara-toekarena.
Fampahalalana vonjy maika any Japon ho an'ireo mpizahatany taorian'ny rivodoza Hagibis
Ny fizahan-tany any Nizeria dia hamorona asa 100 tapitrisa amin'ny 2028